ဂွါဒလူးကျွန်း | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကျွန်းများ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ခရီးသွားများစွာရှာဖွေသောရှုခင်းတစ်ခုမှာကမ်းခြေများ၊ နေနှင့်စိမ်းရေများရှိသည်။ ဤအဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအများအပြားနေရာများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံသယမရှိဘဲ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမှာ Guuadalupe ကျွန်း.
ဒီကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုတွေရှိပါတယ် ပြင်သစ်အလံအောက်မှာ ဒါကြောင့်ငွေကြေးဟာယူရိုဖြစ်တယ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေဟာအတ္တလန္တိတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးလှပပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့၊ လေ့လာဖို့၊ ပျော်ဖို့ဒီမှာအခြေချနိုင်တယ်။ ကံကောင်းတာကပြင်သစ်တွေသာမကဒီနေ့ကငါတို့သိဖို့လိုတယ် Guadalupe ကျွန်း၏ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု.
အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်းစုခြောက်ခုနှင့်လူနေထိုင်မှုမရှိသောကျွန်းနှစ်ကျွန်းနှင့်အခြားကျွန်းနှစ်ကျွန်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သူတို့ကအန္တိဂွာနှင့်ဘာဘရာဒိုတို့၏တောင်ဘက်၊ မြို့တော်သည် Basse-Terre မြို့ဖြစ်သည်အမည်တူကျွန်းပေါ်ရှိ။ အခြားလူနေအိမ်များမှာ Grande-Terre၊ Marie-Galante နှင့် La Désiradeတို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်းများ၏ဘော်ရီဂျင်နီနာမည်ဖြစ်သည် KarukeraExtremadura, Guadalupe တွင်ရှိသောသူတော်စင်၏ပုံရိပ်အားခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်က Santa María de Guadalupe ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ မူလလူမျိုးများဖြစ်သောအရာရာနှင့်ကာရစ်ဘီယံကာရီဘားလူမျိုးများဖြစ်ပြီးစပိန်လူမျိုးများကသူတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်းအမြဲတမ်းငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၇ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ပြင်သစ်တို့သည်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုအခြေချနေထိုင်သူများနှင့်ပြည့်စေခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ဘော်ရီဂျင်နီတွေကသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေမသုံးဖူးတဲ့လူများစွာသေဆုံးခဲ့တဲ့ပိုးမွှားအားလုံးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်။ အတန်ကြာသော်သူတို့သည်ကျွန်ဘဝနှင့်ကျွန်ဘဝရောက်အောင်အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံခဲ့ရသည် သကြားစိုက်ခင်းr ။ ၁၈ နှင့် ၁၉ ရာစုအတွင်းဗြိတိသျှကိုသိမ်းပိုက်သည့်ခုနစ်နှစ်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည်ပြင်သစ်လက်သို့ပြန်လာပြီးစိုက်ခင်းများကစုပ်ယူခဲ့သည် ကော်ဖီနှင့်ကိုကိုး။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးသည်ကျွန်းများပေါ်တွင်ပရမ်းပတာဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉ ရာစုအစတွင်သူတို့ကဆွီဒင်လက်၌ပင်ရှိခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်ကပေးအပ်လိုက်သောအရာဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ကျွန်းစုဟာများပြားလှပါတယ် ကျွန်းပေါင်း ၁၂ ကျွန်းနှင့်ကျွန်းငယ်များရှိသည်, Leeward ကျွန်းများအတွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမီးတောင်။ အဓိကကျွန်းနှစ်ကျွန်းသည်လူကြိုက်များပြီးကောင်းကင်မှကြည့်ရှုသောအခါလိပ်ပြာနှင့်တူသည်။ ၎င်းတို့သည်တက်ကြွသောမီးတောင်၊ သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ကမ်းခြေဖြူများနှင့်စိမ်းသောတောင်များရှိသည့်တောင်တန်းများဖြစ်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးကျွန်းနှစ်ခုမှာ Grande-Terre နှင့် Basse-Terre တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တံတားတစ်စင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးကျန်ကျွန်းများ၊ မာရီဂယ်လန်းတီ၊ လီဆန့်စ်နှင့်လာမစ်ဒီရာရဒ်တို့ကိုကူးတို့ဖြင့်ရောက်ရှိစေသည်။ ကျွန်းများသည်အနောက်ဘက်တွင်ကာရေဘီယန်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိသဖြင့်သူတို့၏ရာသီဥတုကိုခွင့်ပြုထားသည် သစ်တောများ၊ တောင်တန်းများ၊ ရောင်စုံကမ်းခြေများ၊ ရေတံခွန်များနှင့်သန္တာကျောက်တန်းများ။
Guadeloupe ၏ဂိတ်ပေါက်နှင့်နှလုံးသည် Grande-Terre ဖြစ်သည်။ On Basse-Terre အဲဒီမှာ ဂွာဒါလွပ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ဟေး တက်ကြွသောမီးတောင်, La Grande Soufrière။ Guadeloupe သို့သွားရန်အတွက်ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်ဒီဇင်ဘာမှဖေဖော်ဝါရီလကြားဖြစ်သည်။ မိုးရာသီသည်ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိကြာသောကြောင့်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သဲသောင်ပြင်များအပြင်ယဉ်ကျေးမှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပသောပွဲတော်သို့inဂုတ်လအတွင်းကFète des Cuisinièresသို့သွားခြင်းသည်ကောင်း၏။
Guadalupe ကိုအမေရိကန်ကနေဥရောပကနေလေယာဉ်နဲ့သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်းများကိုလှည့်ပတ်ရန်အငှားယာဉ်စီးရန်သို့မဟုတ်ကားငှားရန်အကြံပြုလိုသည် ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်းကြီးများတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းများရှိပြီးကောင်းမွန်စွာမှတ်သားထားသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများရှိသည်။ La Désiradeသို့မဟုတ် Les Saintes ကျွန်းများ၏ gastronomic မြို့တော် Marie-Galante သို့ရောက်ရှိခြင်းသည် ကူးတို့, သင်အွန်လိုင်းလက်မှတ်များသို့မဟုတ်ထွက်ခွာ site ကိုမှာတစ်နာရီမတိုင်မီအထိဝယ်ယူရန်အဘို့အနေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှိပါတယ်။
Basse-Terre သည်အလွန်အစိမ်းရောင်ရှိပြီးအပူပိုင်းဒေသသစ်တောများလေ့လာရန်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မီးတောင်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Soufriere မီးတောင်, သစ်တောလမ်းကြောင်းများ, ရေတံခွန်များနှင့်အတူအပူပိုင်းသစ်တော၏ 17 ဟက်တာ, အမျိုးသားဥယျာဉ်ဝိုင်း, ...
အမှန်တရားကအရမ်းလှတယ်၊ ဒီနေရာမှာမင်းမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ Cousteau အရံနှင့် Paloma ကျွန်းများ, သင်စိတ်ကူးအားလုံးအရောင်များ၏ကမ်းခြေ, အ Carbet ရေတံခွန်, အ ကက်စကိတ် aux Ècrevisses, အ Deshaies ကမ်းခြေ, မီးတောင် Grand Cul-de-Sac Marin သဘာဝဘေးမဲ့တော၊ Fort Delgပြန်လည်, L'Habitation နှင့်ကော်ဖီနှင့်ကိုကိုးစိုက်ခင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ des Roches Graéeves။
Grande Terre ၎င်းသည်ယူနန်ပြည်နယ်၏ကမ်းခြေများ၊ စိမ်းလန်းသောရေကန်များနှင့်သကြားစိုက်ခင်းများစွာရှိသည်။ အဓိကဆွဲဆောင်မှုများမှာ Fort Fleur dÉpée, Pinte-à-Pitre ၏ကျွန်စနစ်ဆန့်ကျင်ပြတိုက်, Basilica Saint Pierre နှင့် Saint Paul, က Le Glosie ၏ islet၎င်း၏ရေအောက်ကမ္ဘာနှင့်အတူဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ Point-des-ChâteauxLe-Pays de la Canne ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးစင်တာဟောင်း More-á-l'Eau သုသာန်နှင့်အထင်ကြီးလောက်သော အဆိုပါ Grande Vigie ၏ကမ်းပါး နှင့် La Porte d'Enfer ။
အဆိုပါDésirade ၎င်းသည်ပင်လယ်သို့မဟုတ်လေကြောင်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းရှိပြီး၎င်းကိုအရှည်ဖြင့်ဖြတ်သန်းနိုင်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်ခြေလျင်ဖြင့်သို့မဟုတ်စကူတာဖြင့်လေ့လာနိုင်သည်။ Isaဝေးလံခေါင်သီလှပသောကျွန်း၁၁ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသောကျောက်သားများသာယာလှပသောသဲသောင်ပြင်များနှင့်ကာကွယ်ထားသောသန္တာကျောက်တန်းများရှိသည်။ ထို့နောက်ငုပ်ရန် Petite Rivièreအဆိုပါနေရောင်ခြည်ရန် Beauséjourကမ်းခြေယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းတွင်ယခင်ကဝါဂွမ်းစက်ရုံ၏ပျက်စီးနေသောအနူကိုလိုနီသို့သွားရောက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Petite Terre ကျွန်းများ၏သဘာဝအလှအပကိုမွေ့လျော်နိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်နာရီလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ Le Morne du Souffleur
Les Saintes ၎င်းသည်ကျွန်းနှစ်ကျွန်း၏ကျွန်းစုဖြစ်သည့် Terre-de-Haut နှင့် Terre-de-Baus ပေါင်းကျွန်းငယ်ခုနစ်ကျွန်းရှိသည်။ ဘရိုတွန်နှင့်နော်မန်အခြေချနေထိုင်သူများရောက်ရှိလာပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ရောင်စုံလမ်းများ၊ ရောင်စုံငါးဖမ်းလှေများနှင့်သစ်သားအိမ်များအတွက်ရေပန်းစားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမ၏ပုလဲများမှာ Pompierre သဲသောင်ပြင်, ဝိန်း Fort နပိုလီယံ ၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များနှင့်အတူ၏တည်ငြိမ်ပင်လယ်အော် la Baie က de Marigot နှင့် L'Anse Crawen ၏သဘာဝကမ်းခြေ။ ထည့်ပါ Pétite-Anse ၏ရွာLa Trace du Dessus de L'Etang လမ်းကြောင်းများ၊ Trace des Falaises၊ Grande-Anse ကမ်းခြေနှင့်ကြွေထည်စက်ရုံများ၏အပျက်အယွင်းများ။
တိုတိုပြောရရင်, Guadalupe ကျွန်းသည်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်၏ပုံမှန် ဦး တည်ရာဖြစ်သည် သဘာဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်း၏လှပသောရောနှောအတူ။ နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုချန်ထားခဲ့တယ် လက်တွေ့ကျတဲ့ဒေတာ:
။ တရားဝင်ဘာသာစကားမှာပြင်သစ်ဘာသာဖြစ်သော်လည်း Creole နှင့်အင်္ဂလိပ်သည်နေ့စဉ်အသက်တာ၌အနည်းဆုံးခရီးသွားareasရိယာများတွင်သာလွှမ်းမိုးထားသည်။
။ ပြင်သစ် plug နှင့်အတူလျှပ်စစ်ဓာတ်အား 220 AC ကို, 50 AC မှာ, XNUMX ဗို့ဖြစ်ပါတယ်။
။ ပြည်တွင်းငွေကြေးသည်ယူရိုဖြစ်သည်။ သို့သော်အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုလက်ခံသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အသေးဘားဆိုင်များနှင့်ကဖေးများတွင်ငွေသည်ငွေသားဖြစ်သည်။
။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှပဲရစ်မြို့နှင့်အခြားမြို့များမှနေ့စဉ်ပျံသန်းမှုခြောက်စီးရှိသည်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်သည် ၈ နာရီခန့်ကြာသည်။
။ ဂွာဒါလူပီသည်ခရုဇ်သင်္ဘောခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ အဓိကသင်္ဘောဆိပ်မှာ Pointe-à-Pitre ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကျွန်းများ » ဂွါဒလupကျွန်း